मेगा बैंकमा जनाताको पैसामा मस्ती : राष्ट्र बैंक बन्यो मुखदर्शक – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
मेगा बैंकमा जनाताको पैसामा मस्ती : राष्ट्र बैंक बन्यो मुखदर्शक
- November 15, 2020 मा प्रकाशित
काठमाडौं । आफ्नो फाइदाको लागी बैंकमा जम्मा भएको रकमलाई अनधिकृत रुपमा प्रवाह गर्दै बचतकर्तालाई ठगी गर्दै आएको मेगा बैंक अहिले राष्ट्र बैंकको निर्देशन समेत लत्याउदै आएको छ । जनताको त्यति ठूलो रकमलाई बैंकले नउठ्ने खराब कर्जाको रुपमा घोषणा गरेर रकम भने आफ्नो अनुकुलतामा समेत निकासी गर्दै आएको छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको मेगा बैंक नामक बैंकमा पटक पटक घोटाला गर्दै व्यक्तीगत रुपमा रकम संकलन गर्नेमा पहिलो नम्बरमै पर्ने गरेको छ । ऋणीमाथी अनाबश्यक दवाब दिने र सेवाग्राहीलाई फोन गर्दा समेत प्रति मिनेट ३ सय रुपैयाँ शुल्क जोड्दै अबैधधन्दा चलाउदै आएको मेगा बैंकमाथी राष्ट्र बैंकले कारबाही नगर्दा सो अबैधधन्दाले झन प्राथमिकता पाएको छ । आफुलाई सेलिब्रेटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत –सिइओ) का रुपमा जबरजस्ती परिचय बनाएका अनिल केशरी शाह अहिले चौधरी ग्रुपको अबैध लगनाी रहेको बैंक नविल बैंकमा गएपछि सिइओ बनेकी अनुपमा खुन्जेली नेपाली बैकिङ क्षेत्रको एकमात्र महिला सिइओ हुन् । तर, उनले बैंकिङ क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउनु पर्नेमा उनीपनि अहिले बदनामी हुदै गएकी छिन् । उनीले पनि आफु अनुकुल र कमिशन पाउने फर्म र व्यक्तिलाई ठूलो मात्रामा ऋण दिन थाले पछि मेगा बैंकमा कारोबार गरिरहेका बचतकर्ताहरु भित्र भने चर्को खेलाबैला मच्चिन पुगेको छ ।
मेगा बैंकमा गुरुदत्त पौडेल र उनकी श्रीमती भुमादेवी गौतम (पौडेल) खराब ऋणीको सूचीमा राखिएका व्यक्ती हुन । २०७६ साल जेठ २९ गते बैंककै सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा गुरुदत्तलाई कालोसूचीमा राखेको पाइएको छ । केन्द्रले पौडेललाई क्रम संख्या ७७११ को कालोसूची नं. १३१५८ नं.मा राखेपनि अहिले पनि सो बैंकबाट कारोबार गर्दै आएको पाइएको छ । श्रीमान् पौडेल कालोसूचीमा परेको ५ दिनपछि उनकी श्रीमती भुमालाई महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगंजले पक्राउ नै गरेको थियो। उनीहरुबाट ठगिएका उत्तम कुमारको निबेदनका आधारमा भुमालाई पक्राउ गरिएको भएतापनि एक हार्डबेयर ब्यापारीलाई ५ लाख ४२ हजार रुपैयाँको खालीचेक दिएको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । श्रीमान् कर्जाको कालोसूचीमा र श्रीमती हिरासतमा रहेका बेला २०७६ असार १८ गते ८५ लाख रुपैयाँ ऋण बैंकले नै जम्मा गरिदिएको पाइएको छ । उक्त रकम बापतको १ प्रतिशत सेवा शुल्क बापत बैंकले ८५ हजार रुपैयाँ आफैले लिएको छ । बैंकमा कुल रकम ८४ लाख १५ हजार रहन्छ भने गत असार १९ गतेका दिन लगातार १० वटा चेक मार्फत उक्त रकम सबै भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । कालोसूचीमा रहेका पौडेलको नामको चेक नं. २०१८३४०८५८ मा ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । सो रकम भुक्तानीसँगै बिस्वास मल्टिपर्पोज प्रालिको नाममा रहेको उक्त खातामा बचत सुन्य बनाइएको छ । सो खेलमा बैंकनै संलग्न भई अबैधधन्दा चलाउदै आएको छ ।
यसरी बैंकले बिचौलियाहरुसँग मिलेर जनताको रकम दोहन गर्दै आएपनि राष्ट्र बैंकभने मौन बसेको छ । बैंककी सिइओ खुन्जेलीले त्यो कारोबार र व्यवहार आफ्नो बाध्यता रहेको बताउँदै आएको समेत उनी निकट एक सदस्यले गोप्य रुपमा बताएका छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेकी भुमा र कालोसूचीमा रहेका गुरुदत्तलाई त्यसरी जनताको रगत पसिनाले कमाएको रकम नियम विपरित दिएर व्यक्तिगत लाभ लिने काममा खुञ्जेलीनै सकृय बन्दै आएकी छिन् । सो बैंकबाट भएको अबैध कार्यकोबारेमा तीब्रखबर डटकमको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।